IGcokama lisolwa ngokuhamba libhabhabala
Charles Khuzwayo | November 16, 2020
ISIHLABANI sikamaskandi, uMthandeni “Igcokama Elisha” Manqele, sikhwele sadilika kuzakwabo esifana naye, uMvelenhle “Igalofu Elisha” Mhlongo emuva kokusabala kwe-video enowesilisa okusolwa ukuthi yiso.
Le-video esisuse umsindo ezinkundleni zokuxhumana inowesifazane onqunu oveza owesilisa ompofu ogundile, maqede washiya intshetshana esilevini.
Yize iningi lisola ukuthi Igcokama Elisha leli elilele eduze kwalo wesifazane obhekile kodwa lona liphika lilala ngomhlane. Okwenza kusolwe Igcokama wukuthi Igalofu Elisha linenqwaba neziboya ezimnyama esifubeni kanti iGcokama kalinazo.
Nakuba kunjalo kodwa Igcokama lisamile kwelokuthi libhecwa ngobende inyama lingayithanga mbibi ngoba lona liwumculi ozihloniphayo emphakathi. Libe selikhomba ngenjumbane uzakwabo, Igalofu Elisha ngoba lithi nguye ozama ngayo yonke indlela ukuzenza lona.
Lize lafaka isithombe seGalofu Elisha ekhasini lalo leFacebook maqede lafaka lo mbhalo:
“...Yilo bhuti wek’liveji ozenza mina. Ebese edakwa alale bhusende namantombazane, maqede kusukelwe mina ngingazi lutho. Mina ngiyazihlonipha...,” kusho Igcokama Elisha, okulindeleke ukuba likhiphe i-albhamu entsha, elizibiza kuyo ngeNdlabeyiphika.
Le nkulumo yeGcokama kayehlanga kahle kwiGalofu Elisha njengoba nalo liziphendulele.
“Ayikho into ebalulekile njengokuhlonipha omunye umuntu.
“Ungahlekisi ngenhlupheko yakubo ngoba ekhaya kini ningcono niphila kahle. Mazi omunye umuntu,” kuphawula Igalofu Elisha, elizokhipha umucwi othi Babuyile.
Kaligcinanga lapha Igalofu kodwa lize lafaka ne-video lapho lithe iGcokama elishefile lona kalishefile, liveza nehwanqa elisahluma. Abantu basigxeke kakhulu isenzo salo maskandi, bemsola ngokuthi akazihloniphi ngoba uhamba ebhabhabala namantombazane.
I-VIDEO esisuse umsindo ezinkundleni zokuxhumana